Lenovo သတင်း: ဖြန့်ချိခြင်း၊ မိုဘိုင်း၊ တက်ဘလက်များ၊ အမြစ်နှင့်အခြားအရာများ - Androidsis | Androidsis
Lenovo သည်လက်ရှိ Android စမတ်ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်များကို operating system အဖြစ်ရောင်းချနေသည်။ ကုမ္ပဏီသည်အခြားအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများအနက်လက်တော့ကွန်ပျူတာများထုတ်လုပ်သည့်အတွက်လည်းလူသိများသည်။ ZUK နှင့် Motorola ကဲ့သို့သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည် Lenovo အုပ်စု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည် Android စျေးကွက်တွင်အရေးအပါဆုံးဖြစ်သည်။
Lenovo ဖုန်းများသည်ငွေအလွန်တန်ဖိုးရှိပြီး၎င်းတို့ကိုစားသုံးသူများအတွက်အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ ဤနေရာတွင် Android operating system အဖြစ် Lenovo ဖုန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ဆုံးသတင်းများသို့မဟုတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများကိုတွေ့နိုင်သည်။
Lenovo Legion Phone Duel သည် 16 GB RAM ဖြင့်ဥရောပဈေးကွက်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်
por အာရုန်သည် Rivas လွန်ခဲ့တဲ့ 10 လအတွင်း .
Legion ဖုန်း မှလွဲ၍ ကျန်သောစမတ်ဖုန်းသစ်ကိုဥရောပကကြိုဆိုလိုက်ပြီ
Lenovo Tab P11 Pro, 2K screen နှင့် Snapdragon 730G ပါ ၀ င်သည့်တက်ဘလက်အသစ်
por အာရုန်သည် Rivas လွန်ခဲ့တဲ့ 11 လအတွင်း .
Lenovo, Motorola ကိုပိုင်ဆိုင်သောတရုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်တက်ဘလက်တွင်တရားဝင်တရားဝင်အရောင်းသွက်ခဲ့သည်။
Lenovo သည်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်ဂိမ်းစမတ်ဖုန်းများကိုလူသိများသောအမှတ်တံဆိပ်မဟုတ်ပါ။ တကယ်တော့ထက်ပိုပြီး ...
Lenovo Z5 Pro GT သည် Snapdragon 855 ပါ ၀ င်သောကမ္ဘာ့ပထမဆုံးမိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးတွင် Android 10 ကိုရရှိခဲ့သည်
Snapdragon 855 သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်အကုန်ပိုင်းတွင်ကြေငြာခဲ့သော ၂၀၁၁ ခုနှစ်၏အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့် chipset ဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်တို့သည် Lenovo ကုမ္ပဏီ၏ဂိမ်းစမတ်ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Lenovo Legion အတွက်ကတိကဝတ်များအကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။
Lenovo M10 Plus သည် Mediatek ၏ Helio P22T chipset ကိုမှီခိုသည့်ကြီးမားသည့်တက်ဘလက်အသစ်ဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Huawei ၏စမတ်ဖုန်းစီးရီးအသစ်ဖြစ်သောအားကြီးသော P40 trio နှင့် ...
Lenovo A7 သည်မိုဘိုင်းအသစ်ဖြစ်ပြီး Spreadtrum SoC နှင့်နိမ့်သောအဆင့်သို့ရောက်ရှိရန်စီစဉ်ထားသည်
Lenovo သည်စမတ်ဖုန်းကိုမကြာခဏမဖွင့်သောတရုတ်ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်၊
Lenovo သည် Legion အမှတ်တံဆိပ်အောက်တွင် 5G ဂိမ်းကစားသည့်ဖုန်းပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်နေပြီးဖြစ်သည်
၎င်းသည် Snapdragon 450 နှင့်စတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည့် Lenovo tablet သစ်ဖြစ်သည်
Lenovo M10 FHD REL သည်ထုတ်လုပ်သူ၏စမတ်ဖုန်းသစ်၏အမည်ဖြစ်ပြီးယခုတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Lenovo K10 သည်အသိအမှတ်ပြုခံရပြီး Moto E6 Plus ၏နာမည်ပြောင်းထားသောပုံရသည်
Lenovo K10 Note နှင့် Lenovo K10 Plus စီးရီးများသည်မကြာခင်အသင်းဝင်အသစ်ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ၏အသိအမှတ်ပြုစာရွက်စာတမ်းများ ...
Lenovo Z5 သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုသိ!
Lenovo K320t အသေးစိတ်အချက်အလက်များဖော်ပြသည်
အသုံးပြုမှုတစ်လအကြာ Moto G4, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်အမြင်
Lenovo Yoga Tab3Pro သည်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ pico projector ပါရှိပါတယ်
သင်၏ Android အတွက်အကောင်းဆုံးကင်မရာကို Lenovo Super Camera ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်